Naya Post Nepal | एउटै परिवारका ६ जना दिदी–बहिनी नेपाल प्रहरीमा जागिरे हेर्नुहोस्
एउटै परिवारका ६ जना दिदी–बहिनी नेपाल प्रहरीमा जागिरे हेर्नुहोस्
एउटै परिवारका ६ जना दिदी–बहिनी नेपाल प्रहरीमा जागिरे हेर्नु होस् । नुवाकोटमा एकै परिवारका ६ दिदीबहिनी प्रहरीमा कार्य रत छन् । एउटै परिवारका ६ जना दिदी–बहिनी नेपाल प्रहरीमा जागिरे भएको मानिसलाई विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ । तर, यो स त्य हो ।
नेपाल प्रहरीमा तलाखु–९ नुवाकोटका एकै परिवारका ६ जना दिदिबहिनी छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा गंगा अधि कारी गौली (असई) छिन् । जमुना अधिकारी कार्की, बेली अधि कारी बस्नेत, तारा अधिकारी बाँस्तोला (हवल्दार) छन ।
भने दुर्गा अधिकारी ढकाल, विष्णुदेवी अधिकारी (जवान) । हाल जमुना र विष्णुले अ,वकाश लिइसकेको अधिकारी परि वारले जनाएको छ । यी ६ चिज घरमा राख्नुहोस् कहिल्यै हुँदैन धनको कमी !
घरमा पैसाको अ,भावले त,नाव पैदा गर्छ । कतिपय ब्यक्तिलाई अत्याधिक मेहनत गर्दा पनि पैसा हात लाग्दैन ।यस्तो वा,स्तु दो,षका कारण हुने वा,स्तु शास्त्रको भनाइ छ । वा,स्तु शास्त्र का अनुसार घरमा केही बस्तुलाई राख्दा धनको अ,भाव हुँदैन ।
शास्त्रअनुसार घरमा यी ६ कुरा राख्दा धनको अ,भाव हुँदैनः
1- घरमा माटोको घडा राख्नुस् । यसले घरमा पैदा गर्ने स,का रात्मक उर्जाले धनको अ,भाव हुन दिँदैन । तर घडामा सँधै स फा पानी भरेर राख्नुस् । 2– घरको दक्षिण पश्चिम दिशामा प ञ्चमुखी हनुमानको प्रतिमा वा तस्विर लगाउनुस् । यसको नित्य पुरा गर्दा घरमा पैसाको अ,भाव हुँदैन ।
3- घरको मुख्य ढोकामा लक्ष्मी र कुवेरको मुर्ती वा स्वस्तिकको चिन्ह्र राख्नु शुभ मानिन्छ । यो चिन्हले घरमा अ,भाव हुन दिँदैन । 4- घरका अधिकाँश सदस्यहरुले धेरै समय विताउने कोठा वा स्थानमा चाँदी, पित्तल वा तामाको पिरामिड राख्नुस् । यसले घरमा धनको अ,भाव हुन दिँदैन ।
5- वा,स्तु शास्त्रमा घरमा शुभ उर्जा पैदा गर्नका लागि धातुले बनेको कछुवा वा माछा राख्नु राम्रो मानिन्छ । यसले घरमा आर्थिक अ,भाव हुन दिँदैन ।nघरमा वास्तु दो,ष हुने भएका कारण धनको अ,भाव हुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ । वास्तु दो,ष हटाउनका लागि घरमा वास्तु भगवानको प्रतिमा राख्नु राम्रो मानिन्छ । यसो गर्दा धनको अ,भाव दुर हुन्छ ।
यो पनि ,,कुश्मा : पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ चुवास्थित परादीमा जीप र बस ठो क्किएर भएको दु र्घटनामा परी एक जनाको मृ त्यु भएको छ। मृ त्यु हुनेमा जीपका चालक बाग लुङको काठेखोला गाउँपालिका वडा नं. ७ का ३१ वर्षिय ला लबहादुर थापा मगर रहेका छन्।
दु र्घटनामापरि १३ जना घा इते भएका छन्। घा ईतेमध्ये तीन जनाको अवस्था ग म्भीर छ। उनीहरुलाई थप उपचारका लागि पोखरा रेफर गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। अन्य १० जनाको जिल्ला अस्पताल पर्वतमा उपचार भैरहे को छ।
बागलुङबाट पोखराका लागि छुटेको ग १ ज ७२५६ नम्बरको टाटा सुमो र पोखराबाट कुश्माका लागि छुटेको ग १ ख ५२१८ नम्बरको बस ठो क्किदा दु र्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्याल य पर्वतका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र अधिकारीले बताए।
जिप सडकबाट हुत्तिएर सडकबाहिरको नालीको भागमा पुगेको छ। केही घाइतेहरूलाई जिपभित्रै च्या पिएको अवस्थामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेका थिए।
अहिले उपचार नै चलिरहेको कारण सबै घाइतेहरूको पहिचान खुलि नसकेको इन्स्पेक्टर अधिकारीले बताए। ट्राफिक प्रहरी नारायण श्रेष्ठका अनुसार बस गलत दिशाबाट गुडेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ।
२०७९ जेष्ठ ५, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 351 Views